Party in my Dorm 5.49 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 5.49 လြန္ခဲ့ေသာ3လက
ဂိမ္းမ်ား ပံုမွန္ Party in my Dorm
Party in my Dorm ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
အစဉ်အဆက်ကိုအကောင်းဆုံးကောလိပ်ဂိမ်းထဲမှာသင့်ရဲ့အေးမြသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Play ။ ကလပ်ကို Join ပြီးပါတီရှာတွေ့ခြင်းသို့မဟုတ်ရုံလည်ပတ်နှင့်အေးမြမိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားလေးများနှင့်အတူ chat ။ သင်နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကပျော်စရာရှိသည်ဖို့ကြိုက်သလောက်ချင်သောသူမည်သည်ကားဖြစ်နိုငျပါသညျ!
လက်ဆောင်တွေစုဆောင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားကိုယ်စားပြုပုံ၏ 100s ရ! သင်တစ်ဦး hipster တစ် surfer, မိန်းကလေးတစ်ဦး, တစ်ဦးလူကလေးနှင့်များစွာသောပိုပြီးရနိုင်!
သင့်ရဲ့အိပ်ဆောင် upgrade နှင့်အသစ်အခန်းဖော်ရ။ တိုင်းသည် hipster နောက်ပြောင်မှုများချွတ်ကခုန်, တိုင်းရန်ပွဲကောလိပ်ကျောင်းများတွင်အများဆုံးအေးမြနဲ့လူကြိုက်များတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်ခြင်းရန်သင့်အားပိုမိုနီးကပ်စွာရရှိသွားတဲ့။ သင်ပင်ဆက်ဆံရေးစတင်ရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစားရှာတွေ့နိုင်ပါသည်။
ကခုန် offs နှင့် hipster နောက်ပြောင်မှုများမှ✓စိန်ခေါ်မှုအခြားကျောင်းသားများ။
✓ BRO, ကလပ်မိန်းကလေးနှင့် Hipster တူသောကိုယ်စားပြုပုံအမျိုးမျိုးထဲကနေရွေးချယ်ပါ။
✓သင့်ရဲ့ကလပ်, ကျောင်းဝင်းစကားပြောခန်း, မက်ဆေ့ခ်ျပို့ chat နဲ့ဖိုရမ်နှင့်အတူ Chat ။
✓အခြားကစားသမားမှ Hilary လက်ဆောင်များပေးပို့ပါ။
✓သင်၏အွန်လိုင်း soulmate နဲ့ဆက်ဆံရေး Start! အလွန်ကြီးစွာသောရည်းစားသို့မဟုတ်ရည်းစားကိုရှာပါ!
ဤသည်သာတစ်ဦး ONLINE ဂိမ်းပါ! Tablet ကိုအသုံးပြုသူများကကစားနိုင်ရန်အတွက် Wi-Fi ချိတ်ဆက်ထားရမည်ဖြစ်သည်။
Party in my Dorm အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
Party in my Dorm အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
Party in my Dorm အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
Party in my Dorm အား အခ်က္ျပပါ
apps စတိုး 2.71M 3546.09M
Party in my Dorm ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း Party in my Dorm အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 5.49
ထုတ်လုပ်သူ A Thinking Ape, Inc.
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.partyinmydorm.com/privacy.html
လက်မှတ် SHA1: 94:4B:D0:0B:8F:9B:B8:08:00:42:00:C9:20:7F:99:70:2C:8E:1A:E4
ထုတ်လုပ်သူ (CN): KaW Developer
အဖွဲ့အစည်း (O): "A Thinking Ape
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): BC
Party in my Dorm APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ